DHAGEYSO:Hoggaamiyaasha maamullada Puntland iyo Jubbaland oo lagu cadaadinaya inay ka qayb galaan shirka Muqdisho ka socda | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Hoggaamiyaasha maamullada Puntland iyo Jubbaland oo lagu cadaadinaya inay ka qayb galaan...
DHAGEYSO:Hoggaamiyaasha maamullada Puntland iyo Jubbaland oo lagu cadaadinaya inay ka qayb galaan shirka Muqdisho ka socda
Wafdi kasocda Beesha Caalamka ayaa shalay gelinkii dambe waxaay gaareen magaalada Garoowe ee xarunta Gobolka Nugaal si ay ula kulmaan Madaxweynaha Maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni.
Wafdiga ayaa la filayaa inay Maanta Madaxweynaha Puntland kala hadlaan xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya, doorashooyinka iyo inuu yimaado Magaalada Muqdisho si uu uga qeyb galo Shirka wadatashiga ee doorashooyinka Soomaaliya oo Muqdisho ka socda.
Dhinaca kale wafdiga ka socda Wakiilada Beesha Caalamka ayaa isla Maanta waxaay ku wajahan yihiin magaalada Kismaayo ooay kula kulmayaan Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe si ay ugu cadaadiyaan in uu ka qeyb galo Shirka Muqdisho.
Wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in Gelinka dambe ee Maanta ay dib ugu soo laaban doonaan Muqdisho si ay uga qeybgalan kulanka Golaha Ammaanka oo ay Khadka Internetka uga qeybgalayaan.
Xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa haatan ah mid Muran Hareeyay, waxaana weli wax heshiis siyaasadeed ah aan laga gaarin arriimaha doorashooyinka dalka.
Madaxweynaha Maamulka Puntlaand Saciid Cabdullaahi Dani oo Xaly ka qaybgalay Kulan Cilmi baarisah oo lagu qabtay Magaalada Garowe ayaa ka hadlay qoddobo dhamaantooda dhaliil ahaa sidoo kale wuxuu sheegay in mudadii u uku sugnaa Magaalada Muqdisho uu Cabsi ka qabay in Cuntada loo sumeeyo sida uu hadalka u dhigay, eedaymo Tiro badan ayuuna u jeediyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmajo,wuxuuna faahfaahiyay shirkii ugu danbeeyay ee dhuusamareeb 4 oo Fashilmay.
Previous articleDHAGEYSO:Xaafadda islii oo laga dareemayo fududeysi dhanka halista cudurka COVID-19 ah
Next articleDHAGEYSO:Kumaxumaato oo xarigga looga jaray dhismaha xarun waqaf ah